अरनिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११औँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न - Ratopress::रातो प्रेस
अरनिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११औँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको अरनिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
अरनिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११औं बार्षिक साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सदस्य अर्जुन कुमार केसीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । सहकारीले कृषी, उद्योग र व्यवसाय तिर लगानी बढाउनु पर्नेमा प्रदेश सदस्य केसीले जोड दिनु भएको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष दमन प्रसाद क्षेत्रीले संस्थाको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो । अध्यक्ष क्षेत्रीले आगामी बर्षका लागी नियमित बचत व्याजमा ५ प्रतिशत,बाल बचत व्याजमा ४ प्रतिशत, दैनिक बचत ३ प्रतिशत र ऐच्छिक बचत ३ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष नवराज न्यौपानेले संस्थाको बार्षिक आयव्याव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । संस्थाले आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ मा १० करोड ५५ लाख बढिको कारोबार गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । संस्थाको कुल नाफा २३ लाख ९४ हजार रहेको र संस्थाको भवन निर्माणका लागी ८७ लाख ९१ हजार ८ सय ७६ रुपैया विनियोजित गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।
संस्थाका अध्यक्ष दमन प्रसाद क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका साँसद अर्जुन कुमार केसी वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष अर्जुन बहादुर पाण्डे, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शरद अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन संस्थाका सचिव द्रोण प्रसाद अधिकारीले गर्नु भएको थियो ।
शितगंगा कृषि तथा पशु विकास महिला सहकारीकाे तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
पुस मसान्त भित्रै कर तिर्न सरकारको निर्देशन, तोकिएको समयमा नबुझाए जरिवाना
ज्याेति सहकारीलाई जिल्लाकाे उत्कृष्ट सहकारी बनाउने लक्ष्य छ – अध्यक्ष भुसाल (भिडियो अन्तवार्ता सहित)
मेला महोत्सव सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग
ज्याेति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १८औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
बराह बचत तथा ऋण सहकारी ठाडाको १८औं साधारणसभा तथा ९औ अधिवेशन सम्पन्न